Vaovao | Fonosana Beyin | orinasa mpanamboatra kitapo sakafo
Ahoana no manapa-kevitra ny amin'ny haben'ny kitapo fonosana sakafo mety?
Efa an-taonany maro tao amin'ny indostrian'ny fonosana, ny fanontaniana napetraka matetika dia ny hoe ahoana ny fomba hanapahan-kevitra ny haben'ny kitapo fonosako?
Ny fonosana dia singa iray tena ilaina amin'ny vokatra rehetra, ary na dia famaritana manan-danja izay afaka mamaritra raha azo amidy tsara ny vokatrao. Tena ilaina tokoa ny famolavolana fonosana. Raha ara-dalàna dia azonao atao ny mangataka amin'ny mpamorona matihanina hamolavola ny kanto ho anao, ampidiro ny fampahalalana tianao hotenenina amin'ny mpanjifa, ny sary famantaranao sy ny loko tianao hampiasaina, ireo asa ireo dia azon'ny olona matihanina atao, tsy mila manahy ianao amin'izany .
Fa ny ampahany sarotra amin'ny fresher dia ny famaritana ny haben'ny kitapoko? Mety hisy olona mankany an-tsena mivantana hitady harona fonosana misy vokatra mitovy aminy ary hijery ny habeny.
Fa ho anao izay mitaky fatratra ny lafiny rehetra amin'ny vokatra dia tena maniry ny hanao habe mifanaraka amin'ny vokatrao ianao. Amin'izao fotoana izao, ankoatry ny firesahana ireo vokatra eny an-tsena sy ny fihainoana ny tolo-kevitr'ilay mpamatsy kitapo fonosana, dia azonao atao ny mampiasa taratasy na sarimihetsika plastika mba hanaovana kitapo tsotra ho an'ny fametrahana andrana hamaritana ny habeny marina. Eto dia andao hampianatra anao ny fomba fampiasana taratasy hanaovana kitapo fonosana tsotra hanandramana ny vokatra.
Ny karazana kitapo fonosana
Voalohany indrindra, tsy maintsy takatsika hoe inona avy ireo karazana kitapo fonosana. Amin'ny ankapobeny, ny kitapo fonosana sakafo dia mizara ho paosy fisaka, paosy mitsangana, paosy gusset amin'ny sisiny, paosy ambany ambany ary paosy mihidy. . Ny paosin-tsiranoka izay mameno zava-pisotro dia azo sokajiana ho paosy mijoro. Kitapo vacuum, kitapo miverina ary kitapo ho an'ny vata fampangatsiahana amin'ny ankapobeny dia sokajiana ho paosy fisaka na paosy gusset. Andao isika hampiditra tsirairay:
1.Kitapo fisaka: antsoina koa hoe kitapo ondana, voaisy tombo-kase ny lafiny telo, azonao atao ao anaty ny vokatra manomboka amin'ny fanokafana, kitapo vacuum, kitapo retort ary kitapo fampangatsiahana mazàna no mampiasa an'ity karazana kitapo ity satria tsy misy joro jamba, ary afaka mamoaka ny rivotra ao anatiny mora ianao .Ary mety amin'ny vokatra vita amin'ny valume kely ihany koa izy io, toy ny vovoka, snack, vatomamy, sns. Azo ahantona amin'ny talantalana na mandry eo ambonin'ny talantalana haseho azy io, ary mora tehirizina ao anaty boaty satria fisaka ilay izy.
2 ..Mitsangàna paosyes: izay afaka mijoro irery eo amin'ny talantalana, misy gusset ambany, azo vidiana aorian'ny famenoana ny vokatra, ary mora mijoro amin'ny talantalana sy aseho. malaza be izy io, ary mety amin'ny chips, vatomamy, sôkôla, voanjo, voankazo maina, vovoka, dite, sakafom-biby, tsiro, ahitra, rongony sns ity karazana kitapo fonosana ity dia ny hamenoana vokatra kely na salantsalany. Ary ny kitapo spout koa dia karazana paosy mitsangana. kanto kanto sy fitaovana maharitra, ity karazana fonosana fonosana ity dia milanja tokoa rehefa aseho eo amin'ny talantalana.
3.Pide gusset paosyes:dia karazana paosy izay aforitra ny roa tonta, ary ireo lafiny roa ireo dia hitarina aorian'ny famenoana ny vokatra, ary malaza amin'ny kafe, ny vary sy ny sisa, tena mety amin'ny biriky vary, ary mety ho kitapo banga koa izany. ny endrikao vokatra dia toradroa kokoa, dia ho tsara tarehy be.
Paosy 4.Flat ambany:ity karazana paosy ity dia malaza be eny an-tsena, satria fisaka ny ambany, afaka mijoro amin'ny talantalana azo iainana izy ity, ary ity karazana kitapo ity dia mety hahatratra sisiny 11 izay azo ampiasaina amin'ny fanontana, toerana malalaka hanehoana ny vaovao mila manonta amin'ny kitapo ianao. Ity karazana kitapo ity dia matetika ampiasaina hitazonana ireo vokatra manana fahaiza-manao lehibe, toy ny saka saka alika be, sakafo alika, kafe, sns. Na izany aza, noho ny fizotran'ny sarotra, lafo be ny vidin'ity kitapo ity, nefa mbola tena tsara tarehy aseho amin'ny talantalana.
Kitapo miverina miverina miverina: Ny kitapo voaisy tombo-kase voaisy tombo-kase amin'ny kitapo, ny endrika dia mety hitovy amin'ny paosy fisaka na paosy gusset. Raha manana milina fonosana manokana ianao dia azonao atao ny mividy ilay horonan-tsary mba hamokarana ilay kitapo voaisy tombo-kase mivantana fonosin'ny vokatra.
Ahoana ny fomba aforitra kitapo fonosana amin'ny alàlan'ny taratasy na sarimihetsika plastika?
Manaraka Avelao hampahafantatra ny fomba aforitra kitapo fonosana amin'ny alàlan'ny taratasy na sarimihetsika plastika mifototra amin'ny habe hitanao avy amin'ny fonosana fonosana mitovy na ny fahazoan-dàlana ataon'ny mpamatsy kitapo.
Kitapom-batsy 1.Flat: Makà taratasy iray izay ny sakany dia mitovy amin'ny sakan'ny kitaponao, ary ny halavany dia in-droa toy ny halavan'ny kitaponao, ary aforeto amin'ny antsasany, avy eo mampiasa lakaoly na stapler hanamboarana ny sisiny roa, avy eo fonosana fisaka tsotra.
2. Mitsangàna paosy:Makà taratasy iray izay ny sakany dia mitovy amin'ny sakan'ny kitaponao, ary ny halavany dia in-droa satria ny halavan'ny kitaponao sy ny sakan'ny gusset ambany, avy eo mamelatra ny taratasy, aforeto araka ny halavan'ny kitapo ny tampony, dia mahazo mihidy ianao, avy eo mamelatra ny taratasy, avy eo aforeto araka ny halavan'ny kitapo ny faran'ny taratasy, mba ho roa sosona ianao. Avadiho ny taratasy mba hifanindry ireo fonosana roa, tsindrio indray mandeha, ary avy eo amboary lakaoly na staples ny roa tonta, avy eo dia mahazo kitapo tsotra mitokana tena ianao.
3. Kitapo gusset amin'ny lafiny:Makà taratasy iray izay ny sakany dia indroa amin'ny sakan'ny kitaponao, ary ny halavany dia mitovy amin'ny halavan'ny kitaponao, ary aforeto avy eo ankavia sy havanana izy, amboary amin'ny lakaoly na staples, avy eo manaova tsipika mivalona 1/2 gusset sakan'ny tsirairay. sisin'ny kitapo, atodiho ny taratasy, ary manaova asa mitovy amin'ny havia sy havanan'ny kitapo. Aorian'ny sary dia aforeto mankao anatiny ny lafiny ankavia mba hifanindry ny tsipika aforeto eo alohany sy aorin'ny roa tonta, kitiho, ary avy eo avereno indray ilay hetsika mitovy amin'ny ilany ankavanana, ary avy eo amboary lakaoly na staples ny ambany. Amin'izany fomba izany dia vonona ny kitapo tsotra misy kitapo misy tombo-kase efatra.
Kitapo ambany 4.Flat:Manaraka ny dingana etsy ambony hanamboatra paosy mijoro tsy misy fametahana, avy eo makà taratasy roa izay ny sakany dia mitovy amin'ny sakan'ny gusset, ary ny halavany dia mitovy amin'ny halavan'ny kitaponao, antsoinay hoe taratasy am-pita izy ireo, avy eo atsangano ny tapa-taratasy iray eo anilan'ny ankavia sisin'ny paosy mitsangana, ary amboary ny ambany sy ny sisiny, avy eo ataovy eo amin'ny ilany havanana ilay zavatra, avy eo misy paosy tsotra fisaka ambany.
5. Paosy voaisy tombo-kase: Makà taratasy iray izay ny sakany dia in-droa amin'ny sakan'ny kitaponao + 2cm, ary ny halavany dia mitovy amin'ny halavan'ny kitaponao, avy eo avy eo amin'ny ilany havia aforeto ao anaty 1/2 ny sakany, mitovy amin'ny ilany ankavanana, avy eo aforeto ny faritra famehezana 1cm amin'ireo roa ireo tapany aforitra, avy eo amboary ny faritra famehezana dia tsy maninona.
Raha tsy afa-po amin'ny haben'ny kitapo natolotry ny mpamatsy kitapo fonosana ianao, aorian'ny fametrahana ny andrana dia azonao atao ny misafidy ny karazana kitapo tianao ary ahodino tsara ny habeny ary andramo indray. Aza adino fa tsy maintsy manandrana ny vokatra ianao alohan'ny hanapahanao hevitra momba ny haben'ny kitapo, ary alao antoka fa ny haben'ny kitapo dia tsy misy olana amin'ny fitazonana ny vokatrao. Ny hateviny sy ny entan'ny kitapo dia afaka manaraka tsara ny tolo-kevitr'ilay mpanamboatra fonosana, ary avy eo mangataka santionany kitapo amin'ireo fitaovana sy hateviny mifanaraka amin'izany mba hanamafisana ny kalitaon'ny kitapo. Ny fonosana Beyin dia manana traikefa famokarana kitapo 20 taona. Raha manana fanontaniana ianao dia afaka mahita valiny matihanina eto hanampy anao hanao kitapo lavorary.
Fotoana fandefasana: Dec-29-2020